28 Dec 2017 . 11:05 AM
ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့်အသုံးပြုသူတွေဟာ ဖုန်းထဲကို Software တွေသွင်းမယ် Game တွေ သီချင်းတွေသွင်းမယ် ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ Restore လုပ်မယ်…ဒီလိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကိုပဲ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်ဖော်ပြပေးမှာကတော့ ဖုန်းဝယ်ယူပြီးတဲ့အခါ မေ့နေတတ်တဲ့ လုပ်သင့်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာများပါလိမ့် ?
1.Google Services တွေထည့်သွင်းဖို့နဲ့
2. Find My Device app နဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Huawei Nova 2i အကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်
Google Apps တွေဘာလို့ထည့်ခိုင်းတာလည်း ?
Android နဲ့ Google ဟာ လုံးဝခွဲထားလို့မရလောက်အောင်ကို အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနေပါတယ်။ Google ဟာ ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် မရှိမဖြစ်လောက်အောင်ကိုလိုအပ်မယ့် Apps ပေါင်းများစွာကိုအမြဲဆိုသလိုထုတ်ပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google ရဲ့ Application တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဖုန်းမှာ Google Framework တွေ Google service app တွေလိုအပ်ပါမယ်။ ဖုန်းအတော်များများမှာတော့ Google service နဲ့အခြား ဝန်ဆောင်မှုApps တွေပါဝင်ပြီးဖြစ်ပေမယ့် Global & Loacl ဆိုပြီး Software Version နှစ်မျိုးခွဲထုတ်တတ်တဲ့ Xiaomi , Meizu တို့လိုဖုန်းတွေမှာတော့ သီးသန့်ပြန်သွင်းရတာမျိုးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Google Services တွေကိုဦးစားပေးထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။
Google Services တွေမပါဝင်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိမလဲ ?
အထူးသဖြင့် Game ကစားတဲ့သူနဲ့ Email ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်များစွာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
Game ကစားသူတွေဟာ အများစုက COC တို့ Mobile Legend တို့လို Online Game တွေကိုစွဲစွဲမြဲမြဲကစားလာကြပါတယ်။ ဒီလိုကစားတဲ့အခါမှာ Mobile game အကောင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး အဆိုပါ အကောင့်ဟာ google account နဲ့သာအများဆုံးချိတ်ဆက်ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Google Account နဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဖုန်းမှာ Google Service တွေပါဝင်နေရမှာဖြစ်ပြီး မပါဝင်ခဲ့ရင်တော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Game ကိုအစကပြန်ဝင်ရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဆော့ခဲ့တဲ့အခန်း ၊ ရရှိခဲ့တဲ့ ရမှတ်တွေ ၊ Skills တွေကိုပြန်လည်ရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့နည်းတူ Gmail အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့လည်း ဖုန်းထဲမှာ Gmail apps နဲ့အသုံးပြုလိုတဲ့အခါမှာ(မည်သည့် Google Apps) Google service frameworks တွေရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
2.Find My Device App ဆိုတာဘာလဲ ?
Find My Device ဆိုတာကတော့ မိမိရဲ့ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဖုန်းရဲ့တည်နေရာကိုရှာဖွေနိုင်တဲ့ Apps တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Apps ကို Google ကထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး Google Services ပါဝင်တဲ့ Android စမတ်ဖုန်းအားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Find My Device Apk ကို ဒီနေရာမှတစ်ဆင့် Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ ? FMD Apk ကို ဖုန်းမှာ Install ပြုလုပ်ပါ။ ပြီးရင် မိမိပုံမှန်အသုံးပြုနေကျ Google account ကိုဝင်ပေးပါ။ ဖုန်းမှာ Internet ဖွင့်ထားပေးဖို့တော့လိုပါမယ်။ အကယ်၍ဖုန်းပျောက်သွားပြီဆိုရင် https://www.google.com/android/find ကို Browser ကနေသွားပြီးတော့ ဖုန်းမှာဝင်ခဲ့တဲ့အကောင့်ကိုဝင်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းတည်နေရာကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းကိုအသံမြည်စေခြင်း ၊ Lockချခြင်းနဲ့ ဖုန်းမှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဖျက်ချပစ်ခြင်း တို့ကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Appကိုထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် ဖုန်းပျောက်တဲ့အခါ ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုများပြားသလို နောက်ဆုံးကိုယ့်ဖုန်းပြန်မရတော့ရင်တောင် မိမိရဲ့ Personal အချက်အလက်တွေကိုတစ်ပါးသူလက်ထဲမရောက်သွားအောင် ဖျက်စီးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးမျိုးရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဖုန်းဝယ်ယူပြီးပြီဆိုရင် ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ အချက်နှစ်ခုကိုမေ့မနေပဲလုပ်ဆောင်ထားဖို့ Akhayar-Tech ရဲ့ Fans တွေအတွက် သတိပေးဝေမျှလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Android စမတျဖုနျးဝယျပွီးတဲ့အခါ ပထမဦးဆုံးပွုလုပျသငျ့သညျ့ အခကျြ ၂ခကျြ
ဖုနျးတဈလုံးဝယျပွီးသှားပွီဆိုရငျ ပုံမှနျအားဖွငျ့အသုံးပွုသူတှဟော ဖုနျးထဲကို Software တှသှေငျးမယျ Game တှေ သီခငျြးတှသှေငျးမယျ ၊ ဖုနျးနံပါတျတှေ Restore လုပျမယျ…ဒီလိုလုပျရိုးလုပျစဉျတှကေိုပဲ ပွုလုပျလရှေိ့ပါတယျ။
ဒီတဈခေါကျဖျောပွပေးမှာကတော့ ဖုနျးဝယျယူပွီးတဲ့အခါ မနေ့တေတျတဲ့ လုပျသငျ့တဲ့အကွောငျးအရာနှဈခုကိုဖျောပွပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဘာမြားပါလိမျ့ ?
1.Google Services တှထေညျ့သှငျးဖို့နဲ့
2. Find My Device app နဲ့ခြိတျဆကျရမယျ့အကွောငျးပဲဖွဈပါတယျ။
Huawei Nova 2i အကွောငျးပိုမိုသိရှိရနျ
Google Apps တှဘောလို့ထညျ့ခိုငျးတာလညျး ?
Android နဲ့ Google ဟာ လုံးဝခှဲထားလို့မရလောကျအောငျကို အပွနျအလှနျအကြိုးပွုနပေါတယျ။ Google ဟာ ဖုနျးတဈလုံးအတှကျ မရှိမဖွဈလောကျအောငျကိုလိုအပျမယျ့ Apps ပေါငျးမြားစှာကိုအမွဲဆိုသလိုထုတျပေးနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ Google ရဲ့ Application တှကေိုအသုံးပွုမယျဆိုရငျ ဖုနျးမှာ Google Framework တှေ Google service app တှလေိုအပျပါမယျ။ ဖုနျးအတျောမြားမြားမှာတော့ Google service နဲ့အခွား ဝနျဆောငျမှုApps တှပေါဝငျပွီးဖွဈပမေယျ့ Global & Loacl ဆိုပွီး Software Version နှဈမြိုးခှဲထုတျတတျတဲ့ Xiaomi , Meizu တို့လိုဖုနျးတှမှောတော့ သီးသနျ့ပွနျသှငျးရတာမြိုးရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ Google Services တှကေိုဦးစားပေးထညျ့သှငျးဖို့အကွံပွုရတာဖွဈပါတယျ။
Google Services တှမေပါဝငျခဲ့ရငျဘယျလိုဆိုးကြိုးတှရှေိမလဲ ?
အထူးသဖွငျ့ Game ကစားတဲ့သူနဲ့ Email ကိုအသုံးပွုပွီးအလုပျလုပျနရေတဲ့ လုပျငနျးရှငျတှအေတှကျမြားစှာထိခိုကျမှုတှဖွေဈပျေါနိုငျပါတယျ။
Game ကစားသူတှဟော အမြားစုက COC တို့ Mobile Legend တို့လို Online Game တှကေိုစှဲစှဲမွဲမွဲကစားလာကွပါတယျ။ ဒီလိုကစားတဲ့အခါမှာ Mobile game အကောငျ့ပွုလုပျရနျလိုအပျပွီး အဆိုပါ အကောငျ့ဟာ google account နဲ့သာအမြားဆုံးခြိတျဆကျဆော့ကစားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလို Google Account နဲ့ ခြိတျဆကျနိုငျဖို့အတှကျဖုနျးမှာ Google Service တှပေါဝငျနရေမှာဖွဈပွီး မပါဝငျခဲ့ရငျတော့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ Game ကိုအစကပွနျဝငျရတဲ့အခါမှာ ကိုယျဆော့ခဲ့တဲ့အခနျး ၊ ရရှိခဲ့တဲ့ ရမှတျတှေ ၊ Skills တှကေိုပွနျလညျရရှိတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ ထို့နညျးတူ Gmail အသုံးပွုသူတှအေနနေဲ့လညျး ဖုနျးထဲမှာ Gmail apps နဲ့အသုံးပွုလိုတဲ့အခါမှာ(မညျသညျ့ Google Apps) Google service frameworks တှရှေိမနခေဲ့ဘူးဆိုရငျအသုံးပွုလို့ရမှာမဟုတျပါဘူး။
Find My Device ဆိုတာကတော့ မိမိရဲ့ဖုနျးပြောကျသှားတဲ့အခါမှာ ဖုနျးရဲ့တညျနရောကိုရှာဖှနေိုငျတဲ့ Apps တဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီ Apps ကို Google ကထုတျပေးထားတာဖွဈပွီး Google Services ပါဝငျတဲ့ Android စမတျဖုနျးအားလုံးမှာအသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Find My Device Apk ကို ဒီနရောမှတဈဆငျ့ Download ရယူနိုငျပါတယျ။
ဘယျလိုအသုံးပွုမလဲ ? FMD Apk ကို ဖုနျးမှာ Install ပွုလုပျပါ။ ပွီးရငျ မိမိပုံမှနျအသုံးပွုနကြေ Google account ကိုဝငျပေးပါ။ ဖုနျးမှာ Internet ဖှငျ့ထားပေးဖို့တော့လိုပါမယျ။ အကယျ၍ဖုနျးပြောကျသှားပွီဆိုရငျ https://www.google.com/android/find ကို Browser ကနသှေားပွီးတော့ ဖုနျးမှာဝငျခဲ့တဲ့အကောငျ့ကိုဝငျလိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ဖုနျးတညျနရောကိုဖျောပွပေးမှာဖွဈပွီး ဖုနျးကိုအသံမွညျစခွေငျး ၊ Lockခခြွငျးနဲ့ ဖုနျးမှာရှိတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ဖကျြခပြဈခွငျး တို့ကိုပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ဒီ Appကိုထညျ့သှငျးထားခွငျးဖွငျ့ ဖုနျးပြောကျတဲ့အခါ ပွနျလညျရှာဖှတှေရှေိ့ဖို့ရာခိုငျနှုနျးပိုမိုမြားပွားသလို နောကျဆုံးကိုယျ့ဖုနျးပွနျမရတော့ရငျတောငျ မိမိရဲ့ Personal အခကျြအလကျတှကေိုတဈပါးသူလကျထဲမရောကျသှားအောငျ ဖကျြစီးနိုငျမယျ့အခှငျ့အရေးမြိုးရရှိမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဖုနျးဝယျယူပွီးပွီဆိုရငျ ဒီလိုအရေးကွီးတဲ့ အခကျြနှဈခုကိုမမေ့နပေဲလုပျဆောငျထားဖို့ Akhayar-Tech ရဲ့ Fans တှအေတှကျ သတိပေးဝမြှေလိုကျရပါတယျခငျဗြာ။
Install ပြုလုပ်စရာမလိုပဲ Google Play Store မှာ Instant Games တွေကို ဆော့ကစားနိုင်ပြီ
Android P Update တွင် ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် App အတော်များများအလုပ်လုပ်တော့မည်မဟုတ်ဟုဆို
Data Package ဝယ်သုံးပေမယ့် မသုံးရသေးပဲ Expired ဖြစ်သွားတာကို ဘယ်လိုရှောင်ရှားကြမလဲ?